भूकम्प पत्ता लगाउने प्रविधिमा क्रान्ति – Everest Dainik – News from Nepal
अनुसन्धानकर्ताहरुले विकास गरिरहेको नयाँ प्रविधिको सहयोगमा अब भूकम्प पत्ता लगाउन पहिलेभन्दा सहज हुने भएको छ ।
आइस्ल्यान्डका अनुसन्धानकर्ताहरूले फाइबर–अप्टिक सञ्जालको प्रयोग गरी भूकम्पीय तरङ्गहरूको सफलतापूर्वक आकलन गरेका छन्। इन्टर्नेट र टेलिभिजन सेवा प्रवाह गर्न संसारभरि भूमिमुनि फाइबर–अप्टिकको तार बिछ्याउने गरिन्छ।
भूकम्प मापन परीक्षणको क्रममा त्यस्तो तारको सञ्जाल भूमिमा कम्पन भएलगत्तै संवेदनशील हुने गरेको पाइएको छ। तर अहिले नै यो प्रविधि व्यापक रूपमा प्रयोगमा ल्याउनका लागि तयार भइसकेको छैन।
भूकम्प पत्ता लगाउन स्मार्टफोन एपहरू र अन्य सस्ता हार्डवेयरहरू प्रयोगमा आइरहेको बेला अब त्यस प्रयोजनका लागि फाइबर-अप्टिक तारको प्रयोग थपिएको हो। अहिलेसम्म होसियारीपूर्वक मिलाएर संवेदनशील स्थानहरूमा जडान गरिने सिस्मोमिटर भनिने मूल्यवान् यन्त्रको सहायताले भूकम्पको मापन गर्ने गरिएको छ।
तर फाइबर–अप्टिक तारको मद्दतले पनि भूकम्पको प्रभावकारी मापन सम्भव भएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।
डा. फिलिप जोसेट नेतृत्वको जीएफजेड् जर्मन रिसर्च सेन्टर अफ जिओसाइन्सेसका अनुसन्धानकर्ताहरूको टोलीले दुई वटा जिओथर्मल प्लान्टहरूबीच सन् १९९४ मा बिछ्याइएको १५ किलोमिटर लामो फाइबर–अप्टिक तारमा अध्ययन गरेको थियो।
त्यस क्रममा तार बिछ्याइएको दूरीमा कुनै बाधा भयो कि भएन भनेर थाहा पाउन एक फाइबरमार्फत् पठाइएको लेजरको एउटा कम्पन नै पर्याप्त भयो। ‘त्यसबाट के थाहा पाइएला भन्नेबारे हामीलाई सुरुमा केही थाहा थिएन,’ डा. जोसेटले भने, ‘तर हामीले टाढैबाट भूकम्प गएको थाहा पाउन सक्यौँ।’
जमिन वा तार तन्किएको वा खुम्चिएको जानकारी अनुसन्धान टोलीले सजिलै पायो। त्यो टोलीले त्यसको अभिलेख राख्न सक्यो।
अनुसन्धानकर्ताहरूले स्थानीय ट्राफिक आवतजावत, भूकम्प र पदयात्रीको हलचल बारे जानकारी पाउन सके। उनीहरूले इन्डोनेशियामा गएको ठूलो भूकम्पको तरङ्ग समेत थाहा पाए।
‘यो त सिस्मोमिटर जत्तिकै प्रभावकारी भयो,’ डा. जोसेटले भने।
फाइबर–अप्टिकमार्फत् भूकम्प अनुगमन गर्नका लागि हरेक केबलसँगै एक उपकरण जडान गर्नु पर्दछ। अहिले त्यो महँगो पर्ने भएकोले अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यसको सस्तो विकल्पबारे शोध गरिरहेका छन्।
यदि नयाँ प्रविधि सर्वसुलभ हुन सकेमा यो निकै महँगो सिस्मोमिटरको सस्तो विकल्प हुन सक्छ। अमेरिकी भौगर्भिक अध्ययन संस्था यूएसजीएसकी एक जिओफिजिसिस्ट एलिजाबेथ कोक्रनका अनुसार नयाँ प्रविधिलाई अझै परिष्कृत गरेर भूकम्पबारे पूर्व सूचना दिन सम्भव हुन सक्छ।
भूकम्प सुरु हुने बित्तिकै पूर्व सूचना दिने यस्ता सञ्जालहरू जापान र मेक्सिको जस्ता देशमा अहिले नै प्रयोगमा आइरहेको बताइन्छ। कोक्रनले भनिन्, ‘पूर्व सूचना दिन हामीलाई एकदमै सही जानकारी आवश्यक छैन। हामीलाई कुनै स्थानमा ठूलो कम्पन भइरहेकोबारे थाहा पाउन आवश्यक हुन्छ।’
विश्वभर व्यापक रूपमा विस्तार भइरहेको फाइबर–अप्टिक तारको सञ्जाल भूकम्पबारे जानकारी पाउन र पूर्व सूचना प्रणाली विकास गर्न सहयोगी हुनसक्ने उनको धारणा छ। बीबीसी
आइसीसीद्वारा नयाँ वानडे वरियता सार्वजनिक, कस्तो छ नेपालको अवस्था ?
पूर्वमेयर राईको निधनमा धरानमा सार्वजनिक बिदा
नेपाली सेनामा २२ सय बढी पदमा जागिर खुल्यो (विज्ञापनसहित)
नेकपामा अब कसैलाई ‘तँ’ भन्न नपाइने ! (११ बुँदे आचारसंहिता)
अष्ट्रेलियामा धुलोको आँधीः शहरमा दिउँसै अँध्यारो, चेतावनी जारी
तेस्रोलिंगी अजिताको बलात्कारपछि हत्या
दैनिक ७ जनाले दिन्छन् राजीनामा, प्रहरी पेशाप्रति बढ्दो निराशा